Umkhaya - Ningbo BestCleaner Co., Ltd
Indlela yokuthuthukisa ubudlelwano nemindeni? Thanda Mummy kwanelisa kakhudlwana, Ingane buhle kakhulu futhi Dady iyajabula ngaphezulu? Kungani ubamba ephathini? Sicela ungakhathazeki, BVC kuzokusiza uqeda yonke imisebenzi ahlanzekile. .
Wena nabangani abaningi futhi ufuna ukubamangaza, kungani abamangali ngokuba usokhay party BBQ? Ungavumeli endlini yakho zingcolile uthole endleleni ejabulela isikhathi sakho nge abangane abahle. Nasi 5 step plan ukukusiza ukuhlanza indlu yakho - akukho ukucindezeleka, nje okulula sifinyelele imisebenzi.
Ngakho kuphi ukuqala? Ukuze uthole party BBQ, izivakashi uzobe kokuchitha isikhathi sabo esiningi ngaphandle, ngakho ezindaweni ezibaluleke kakhulu ukuhlanza endlini kuthiwa emnyango, igumbi, ikhishi kanye yokugezela ophilayo. Asikho isidingo ukuhlanza yonke indlu kodwa kunalokho bagxile endleleni party - ukunakwa kakhulu abantu kuyoba kumathebula, emashalofini nezindawo ukusetha iziphuzo zabo.
Kulula, nje 5 izinyathelo zayo:
Qala ngiphakamisa iyiphi endaweni izinto, emasofeni eqondisa, ezihlalweni, imicamelo kanye refolding Ufaka (olukhulu bafihle iyiphi amabala - Nokho ngeke kudingeke ukuba wenze lokhu ngemva usebenzisa le mikhiqizo BVC) . Okulandelayo ukuhlanza etafuleni, isikrini se-TV amakhabethe nokunye ngomuthi enothuli ngokusebenzisa ngendwangu wangaphandle. Ekugcineni, ushanela isiphi uthuli noma isilwane izinwele phansi, futhi ungakhohlwa ukuhlanza skirting amabhodi yakho usebenzisa cleaner yakho ibhulashi noma hose okunamathiselwe.